The Way Back (2020) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Al Madrigal, Ben Affleck, Ben Irving, Brandon Wilson, Charles Lott, Fernando Luis Vega, Janina Gavankar, Jr, Melvin Gregg, Michaela Watkins, Will Ropp
ဒီကားမှာ ဘနျအဲဖလကျကို ဘတျစကတျဘောနညျးပွကွီးဂကျြကနျနငျဟနျ အဖွဈတှမွေ့ငျရမှာပါ …..ဂကျြဟာ လူမှုရေးပွဿနာပေါငျးစုံကွောငျ့ စိတျထောငျးလို့ကိုယျကပြွေီး ကွုံရာကပြနျးအလုပျတှလေုပျနတေဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြကငျးမဲ့တဲ့ လူသားတဈယောကျပါ …..
မိနျးမနဲ့လဲအဆငျမပွေ မိသားစုပျေါလဲနားမလညျပေးနိုငျတဲ့ဂကျြတဈယောကျ ပငျပငျပနျးပနျးအလုပျတှလေုပျပွီး မနကျဆိုလဲဘီယာလေးနဲ့ အလုပျခြိနျမှာလညျး ဘီယာလေးတမွမွနဲ့ အလုပျသိမျးပွနျတော့ ဘားလေးဒိုးပွီး တခြိနျလုံး စိတျဒဏျ ရာတှကေိုအရကျနဲ့ကုစားနရေတဲ့ လူတဈယောကျပါ …..
ဘာအလုပျမှမယျမယျရရတဈထိုငျတညျးမလုပျပဲ အရကျခညျြးသောကျနတေဲ့ ဂကျြဆီ တဈခြိနျကသူအောငျပနျးဆငျခဲ့တဲ့ ဘတျစကတျဘောလောက ကလူတဈယောကျနညျးပွလုပျဖို့ ကမျးလှမျးလာပါတော့တယျ …..
သူ့ဆီကမျးလှမျးတဲ့သူက Church ကြောငျးကဘုနျးတျောကွီးဒဗိုငျးပါ ….
ခရဈယနျဘာသာရေးဘတျစကတျဘောအဖှဲ့ ကို စိတျဒဏျ ရာရပွီးအရကျနဲ့လကျမပွတျတဲ့ဂကျြကိုမှ ဘယျလိုနားလညျမှု ၊ ဘယျလိုယုံကွညျကိုးစားမှုတှနေဲ့ ဘဈရှော့ဟေးဆိုတဲ့အညတရဘတျစကတျဘောအသငျးကို နညျးပွဖို့ ငှါးတယျမသိပါဘူး…
IMDb မှာ 7.1 Rotten Tomatoes မှာ
83% နဲ့လတျလတျဆတျဆတျကွီး မငျးသားကလဲ Ben Affleck ဆိုတော့အထူးညှနျးစရာလိုမယျမထငျတော့ပါဘူး
ဒီကားမှာ ဘန်အဲဖလက်ကို ဘတ်စကတ်ဘောနည်းပြကြီးဂျက်ကန်နင်ဟန် အဖြစ်တွေ့မြင်ရမှာပါ …..ဂျက်ဟာ လူမှုရေးပြဿနာပေါင်းစုံကြောင့် စိတ်ထောင်းလို့ကိုယ်ကျေပြီး ကြုံရာကျပန်းအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့တဲ့ လူသားတစ်ယောက်ပါ …..
မိန်းမနဲ့လဲအဆင်မပြေ မိသားစုပေါ်လဲနားမလည်ပေးနိုင်တဲ့ဂျက်တစ်ယောက် ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်တွေလုပ်ပြီး မနက်ဆိုလဲဘီယာလေးနဲ့ အလုပ်ချိန်မှာလည်း ဘီယာလေးတမြမြနဲ့ အလုပ်သိမ်းပြန်တော့ ဘားလေးဒိုးပြီး တချိန်လုံး စိတ်ဒဏ် ရာတွေကိုအရက်နဲ့ကုစားနေရတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ …..
ဘာအလုပ်မှမယ်မယ်ရရတစ်ထိုင်တည်းမလုပ်ပဲ အရက်ချည်းသောက်နေတဲ့ ဂျက်ဆီ တစ်ချိန်ကသူအောင်ပန်းဆင်ခဲ့တဲ့ ဘတ်စကတ်ဘောလောက ကလူတစ်ယောက်နည်းပြလုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းလာပါတော့တယ် …..
သူ့ဆီကမ်းလှမ်းတဲ့သူက Church ကျောင်းကဘုန်းတော်ကြီးဒဗိုင်းပါ ….
ခရစ်ယန်ဘာသာရေးဘတ်စကတ်ဘောအဖွဲ့ ကို စိတ်ဒဏ် ရာရပြီးအရက်နဲ့လက်မပြတ်တဲ့ဂျက်ကိုမှ ဘယ်လိုနားလည်မှု ၊ ဘယ်လိုယုံကြည်ကိုးစားမှုတွေနဲ့ ဘစ်ရှော့ဟေးဆိုတဲ့အညတရဘတ်စကတ်ဘောအသင်းကို နည်းပြဖို့ ငှါးတယ်မသိပါဘူး…
IMDb မှာ 7.1 Rotten Tomatoes မှာ
83% နဲ့လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီး မင်းသားကလဲ Ben Affleck ဆိုတော့အထူးညွှန်းစရာလိုမယ်မထင်တော့ပါဘူး
Al Madrigal Ben Affleck Ben Irving Brandon Wilson Charles Lott Fernando Luis Vega Janina Gavankar Jr Melvin Gregg Michaela Watkins Will Ropp
Al Madrigal Alexander Tassopoulos Ben Affleck Ben Irving Brandon Wilson Brian Nuesi Caleb Thomas Carly Schneider Chad Mountain Charles Lott Chieko Hidaka Chris Bruno Christina Sergoyan Christine Horn Craig Reed Cynthia Rose Hall da'Vinchi Edelyn Okano Fernando Luis Vega Glynn Turman James P. Harkins Janina Gavankar Jay Abdo Jayne Taini Jedediah Jenk Jeremy Radin Jeremy Ratchford Josh Latzer Jr Justice Alan Lukas Gage Marlene Forte Melvin Gregg Michaela Watkins Mike G. Nico David Olivia Cannizzo R.J. Asher Rachael Carpani Rylee Cravens Sal Velez Jr. Shantiel Alexis Vazquez Shay Roundtree T. K. Carter Tom Archdeacon Troy Brookins Will Ropp Yeniffer Behrens
Option 1 storage.msubmovie.com 506 MB SD (480p)
Option2usersdrive.com 506 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 506 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 506 MB SD (480p)
Option5uptomega.com 506 MB SD (480p)
Option7usersdrive.com 1.2 GB HD (1080p)
Option 8 uptomega.com 1.2 GB HD (1080p)
Option 12 usersdrive.com3GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 13 sharer.pw3GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 14 yuudrive.me3GB FHD (1080p) DTS 5.1
Blood and Ties (2013) 2013